Omunye houseplants athandwa kakhulu - Aloe - kungokwalabo umndeni Liliaceae, amaSucculents iqembu. Sici Its main esiwuphawu iyona eside, embozwe ameva soft amaqabunga esinamanzi. Khula Aloe abalandeli zezitshalo zasendlini hhayi kuphela njengoba umhlobiso kodwa futhi njengoba isitshalo okwelapha.
Aloe iyikhaya Afrika. Kuleli zwekazi, kunabangaphezu kuka-250 zama-lesi sitshalo. Ekhaya, ngokuvamile esekhulile vera Aloe. Ngenye indlela, lolu hlobo ibizwa ngokuthi i-agave. Isikhathi esining impela ezindlini kungenziwa izitshalo endlini nayizimfundamakhwela wazibona njengoba Aloe spinous, enemibala noma eligoqiwe. Lokusakaza lezi zinhlobo - inqubo ngokuvamile elula. Okufanayo wenze indlela yokuthola kwesitshalo esisha kusukela kumama.
Izindlela eziyinhloko yokuzalanisa
Thola izitshalo ezintsha elalivela esihlahleni enhlaba, kanye kunoma iyiphi enye amaSucculents, silula. Phindaphinda lokhu isitshalo unga:
Ngokuvamile, Aloe okusakazwa Kiddies. Kulokhu, izitshalo ezisencane kufanele kube nje umbe bese ukuhambisa ebhodweni entsha. Okunye amasu ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Aloe: ukukhiqizwa kabusha eziqongweni, cuttings kanye namahlamvu
Thatha ukutshala impahla kulesi simila umzali kufanele kube ngokucophelela ngangokunokwenzeka. Iziqongo benqunywa ngommese obukhali ukuze bahlala cishe 5-6 amahlamvu. I-cuttings abahlukene stem uqobo. Ishidi inqanyulwa ngasesinqeni se ihlumela. Thatha ukutshala impahla for wokusakazeka ngokuvamile ngo-February noma ngo-March. Beka Imi on the isitshalo umama ziphathwe namalahle. Sami temabhodlela, cuttings noma amahlamvu omile izinsuku 5-6.
Ngaphezu kwalokho zokutshala lwajula kancane (3 cm) esihlabathini ezimanzi. Ngemva ukubukeka izimpande zezitshalo entsha zidluliselwa iziqukathi ayigcwalisa ngomhlabathi. I amabhodwe ngaphambilini wathela amanzi. Njengoba pochvosmesi oluvame ukusetshenziswa ukwakheka efanayo, lapho okwandisa Aloe kwabakhulelwe. Uma lokhu umhlabathi akuyona ngakwesokunene, angathengwa at laqanjwa okukhethekile esitolo senzelwe ukutshala Cacti. Kunoma ikuphi, inhlabathi kumele kube ene-asidi kancane. Yiqiniso, kufanele izitshalo abasha batshala wanisela. Lokuzaliswa Aloe leaf, ithiphu noma cuttings ngokushesha futhi ngaphandle kokuhlupheka kakhulu ukuthola izinto ezintsha ezimbalwa.
Le nqubo ubhekwa abatshali ngempela eziyinkimbinkimbi nabasafunda kuyaqabukela asetshenziswa. Kodwa ngale ndlela ingatholakala ngesikhathi esifanayo eziningi kakhulu enhlaba abasha entsha. imbewu Lokusakaza siyophumelela kuphela uma ukusetshenziswa inhlabathi ukuxubana ekhethekile ehlanganisa:
1 okuyingxenye ibolile phansi ishidi;
2 izingxenye wageza umfula isihlabathi futhi steamed.
Leyo nhlabathi is batheleka nezitsha nge izimbobo phansi. Khona-ke imbewu bandlale phezu kwalo. Ngokulandelayo, ufafaza nabo kancane isihlabathi. Moisten phansi ngokufaka wehlise nezitsha emanzini sump imizuzu embalwa. Ngemva potting umhlabathi umswakama pick up, ibekwe ngendlela teplichku esitsheni.
izithombo imila enhlaba, imifanekiso le ndlela - inqubo empeleni lula kakhulu, mayelana 5-6 izinsuku emva kokutshala. Ukunisela agave osemusha okumelwe abe yikho spray esihle. Izithombo uhlezi eemumathini ehlukile ngemva kokuthi avele iqabunga 1-2 kweqiniso.
Nomaphi lapho eya noma ukukhiqizwa kabusha senziwe enhlaba - ithiphu cuttings, amahlamvu noma imbewu - izitshalo ezintsha ukukhetha indawo kahle. Faka amabhodwe nge-agave ohamba phambili ku-sill iwindi eningizimu. Ngokungafani nezinye izitshalo eziningi zasendlini, ukuphuza amaphilisi amaningi yelanga ye lokhu amnandi kancane ngesaba. Egumbini elimnyama kuyinto Aloe uzobe enwetshiwe, futhi amaqabunga ayo ngeke ayilutho. Ebusika, kungcono ukuhambisa isitshalo ekamelweni elikhanyayo, kodwa cool (air lokushisa 12-13 c.).
Yiqiniso, Aloe, imifanekiso ekhaya ukuthi kungenziwa ngezindlela eziningi, ziyojabula abanikazi i ukubukeka ekhangayo nokuthuthukiswa ezinhle kuphela, uma unakekelwa kahle. Zalisa umhlabathi lesi sitshalo ngokuvamile ngenyanga kabili. Kanyenti ukondla Aloe akufanele kube kungenjalo angase agule. Njengoba Umanyolo ukwakhiwa ngokuvamile ezisetshenziswa eyenzelwe Cacti.
Indlela nisela kahle
Kanyenti imanzise umhlabathi ebhodweni ne Aloe futhi akufanele kube. Udla izindwani, lesi sitshalo akathandi. Ngaphezu kwalokho, akakubekezeleli amanzi amile kuso. Ngezinye nomswakama eliphezulu kakhulu izimpande kalula Aloe kungaba ukubola. Indlela engcono kakhulu ye ukuchelela amnandi kubhekwe ekushoniseni imbiza imizuzu embalwa emanzini. Ehlobo lika-Aloe ngokuvamile bazithela kanye ngesonto ebusika - kanye ngenyanga.
Aloe Vera livame ukusetshenziswa njengoba isitshalo okwelapha. Nokho, ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi yena ngokwakhe udinga abanikazi usizo. Ngokuvamile, Aloe kuthinta izinambuzane ezifana Jose esikalini. Lokhu isinambuzane lihlaba amahlamvu akhe abukhali lezi kanye Aloe juice isiphuzo. Ukuze bavikele isitshalo izinambuzane esikalini, amaqabunga isiqu kufanele usule isixazululo engahlula uviniga.
Kwenzeka kanjalo ukuthi Aloe isitshalo spider ngomnikelo omncane. Ukuze ulwe usongo noma ukusebenzisa isixazululo utshwala ababuthakathaka noma tincture garlic. Ngokuba nokuvimbela ukutheleleka izibungu Aloe kumele ngezikhathi fafaza ukumnika ugwayi.
Ngiphephile isifo ovamile zalesi sitshalo iyona bola impande. Kutfutfukisa lizinga lapho zichichima. Uma inkinga kwenzeka okokuqala, wehlisa ijubane ukukhula agave, bese iqala ekuhlehleni.
Found in Aloe nezinye izifo ezivamile phakathi houseplants. Kodwa ngokuvamile, lokhu amnandi oluphakeme amelana izinhlobo ezahlukene izifo kanye KWAMAGUNDANE isinambuzane. Njengoba izinkinga ukunakekelwa efanele zabanikazi Aloe cishe ngeke ukuletha. Ngaphezu kwalokho, uma kudingekile, ukuze uthole izitshalo ezintsha uzobe nakakhulu sokudliwa unina. Lokuzaliswa Aloe cuttings, amahlamvu, umntwana, njll - .. Inqubo ezinzima elula.
Charming imbali Levisa - ukutshala nokunakekela
Okusajingijolo "Polka": libuyekeza balimi
Indlela yokutshala Imilunge - ukunakekelwa kahle lezi zimbali ezinhle kakhulu
Indzaba lemfisha "I Canterville Ghost" - isifinyezo
"Scrubs" ngoba esiswini. Ungadliwa, ukubuyekezwa
Yini esongela isikhali sezulu
Uvumelanise okwenyanga: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo. Ukwakhiwa kwezindlu kusukela Amabha profiled
Ihhotela e Novosibirsk ezishibhile: incazelo, ikheli, ukubuyekezwa
Okuhamba phambili kwe-concealer ngaphansi imibuthano iso